Accueil > Gazetin'ny nosy > Covid-19 : Mpanohitra efatra lehibe no maty
Covid-19 : Mpanohitra efatra lehibe no maty
Tao anatin’ny iray volana izay dia mpanao politika efatra lehibe no maty teto Madagadikara vokatrin’ny covid-19. Ny 10 janoary 2022 no maty ny Profesora James Ratsima izay mpanohitra izao fanjakana izao ary isan’ireo lohandohany amin’ny fitakiana ny vondro-nosy Eparses. Taorian’izay dia maty koa ny jeneraly “de corps d’armé” Herilanto Raveloarison. Minisitrin’ny toe-karena sy ny tetimpivoarana tamin’ny andron’i Hery Rajaonarimampianaina. Ny zoma faha 21 janoary 2022 teo koa no maty ny jeneraly Rasolomahandry Edmond Arsène izay lehiben’ny Etamazaoro ny tafika farany tamin’ny fanjakan’i Ravalomanana Marc.
Omaly talata faha 25 janoary 2022 dia maty indray ny mpisolovava Maître Willy Razafinjatovo izay fantatrin’ny maro amin’ny anarana hoe OLALA.
Very olomanga ny firenena tamin’izao fahalasan’izy efa-dahy izao. Voa mafy toa izany koa ny mpanohitra amin’izao fotoana izao satria dia isan’ireo olona azo lazaina fa mirona amin’izany fanoherana izany izy ireo. Ny Maître Olala dia isan’ireo izay tsy mihambahamba mihitsy milaza ny tsy fankatoavany ny fitondrana ankehitriny.
Efa malemy ny mpanohitra ara-potokevitra sy ara-pihetsiketsehana ankehitriny, nefa dia mbola nampian’izao fahafatesan’ireo olobe ireo. Ny mampalahelo amin’ity raharaha ity dia ireo azo lazaina fa madio sy tsara ireo maty ireo.
Tiana ho marihina fa maro no maty ny mpanao politika Malagasy tao anatin’ny roa taona izay. Ny Amiraly Didier Ratsiraka, Jeneraly Dollin Rasolosoa, Kolonely Ndrenasolo, ny jeneralin’ny polisy Rakotondrazaka Arsène, Bertnes Lalaina, ary misy koa ireo senatera sy depiote vitsivitsy na teo aloha izany na mbola amperinasa.
Marihina ihany koa fa maro ny manamboninahitra miaramila sy dokotera ary profesera eny amin’ny oniversite no maty tamin’ity valanaretina ity tao anatin’ny 2 taona izao. Maro ny manampahaizana sy mpanao politika maty.